Dr. Tint Swe's Writings: Minipill ကိုယ်ဝန်တား အသေးစား ဆေးပြား
ဆရာ နို့တိုက်မိခင်သောက်သင့်တဲ့ဟော်မုန်း ၁ မျိုးပါ ဆေးနာမည်တွေ ဖော်ပြပေးပါလားရှင့်။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ ရပါသလား။
Brands of mini-Pill are available ဟော်မုန်းတမျိုးတည်းပါ စားဆေးနာမည်အမျိုးမျိုး
- Aizea (desogestrel)
- Cerazette (desogestrel)
- Cerelle (desogestrel)
- Exluton (Lynestrenol)
- Nacrez (desogestrel)
- Micronor (norethisterone)
- Noriday (norethisterone)
- Norgeston (levonorgestrel)
- Nor-QD (norethindrone)
- Micronor (norethindrone)
- Zelleta (desogestrel).
Implant ဟော်မုန်းတမျိုးတည်းပါ အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ဆေးချာင်း
Etonogestrel = Implanon, Nexplanon
Shot/Injection ဟော်မုန်းတမျိုးတည်းပါ ၃ လခံထိုးဆေး
Medroxyprogesterone = Depo-Provera
1. Very-low-dose progestogen-only ဟော်မုန်း အနည်းဆုံးပါတဲ့ အမျိုးအစားက အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ Norplant Subdermal implants, Jadelle (Levonorgestrel implants)၊ သားအိမ်ထဲထည့်တားရတဲ့ Intrauterine systems (Progestasert, Mirena) တွေနဲ့ သဘောချင်းတူတယ်။ မ-မျိုးဥ ထွက်တာကို ၅ဝ% သာ တားနိုင်တယ်။ သားအိမ်အဝ အချွဲကို စေးပျစ်တာကိုသာ ဖြစ်စေတယ်။
• ကလေးနို့တိုက်နေချိန်လဲ သောက်နိုင်တယ်။
• ဆေးဖြတ်တာနဲ့ ကလေးပြန်ရဘို့ လွယ်တယ်။
• ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်သူတွေလဲ သောက်နိုင်တယ်။
• နှလုံးရောဂါရှိသူတွေအတွက် စိတ်ချနိုင်တယ်။ သွေးခဲတာ နည်းတယ်။ PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်တဲ့ ရောဂါကို အဖြစ်နည်းစေ တာတော့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲတားဆေးနဲ့ အတူတူဘဲ။
• ဆေးစသောက်ကာစ အစောပိုင်းလတွေမှာ ရာသီမမှန်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့ စွန်းယုံသာလာတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့တော့ များတယ်။
• ရာသီမလာဘဲနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တလအထိ နောက်ကျသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
• ဝက်ခြံထွက်မယ်၊ ပျို့ချင်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ရင်သားတင်း-နာမယ်၊ ဒါတွေကလဲ စောစောပိုင်းလတွေမှာသာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
• လူက ဝလာနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေးလောက် ကိုယ်အလေးချိန် မတက်ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆက်မတိုးတော့ဘူး။
• ဆေးသောက်ကာစ ပဌမတနှစ်မှာ ၃ လတကြိမ် ဆေးစစ်သင့်တယ်။ နောက်ပိုင်း ၆ လတခါစစ်သင့်တယ်။
• လိင်စိတ်နည်း၊ စိတ်မူပြောင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျ၊
• ၁ဝဝ မှာ ၁ ယောက်ကနေ ၁၃ ယောက်အထိ ပဌမ ၁ နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရတာတွေ့ရတယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲထက် ဒီလိုဖြစ်တာ ပိုများတယ်။
• တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရလာရင် သိဘို့ခက်တတ်တယ်။ ကံမကောင်းရင် သားအိမ်ပြင်ပမှာ သန္ဓေတည်နိုင်တယ်။
• (သီအိုရီ) အရပြောရရင် ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲနဲ့ အတူတူထိရောက်တယ်။ နည်းနည်းလေးတော့နည်းတယ်။
• အချိန်တူသောက်ဘို့၊ ရက်မပျက်ဘို့ ပိုလိုတယ်။
• ရာသီတလ သွေးစဆင်းတဲ့ရက်ကနေ စသောက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
• ဆေးသောက်အပြီး ၄-၂၂ နာရီအတွင်းမှာ သားအိမ်အဝအချွဲ စေးပျစ်တာက အများဆုံးအချိန် ဖြစ်လို့ မနက်ခင်း ဆေးသောက်ပြီး ညမှာအတူနေတာ အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။
• ရာသီစလာတဲ့ရက်မှာ စသောက်ပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် သေခြာအောင် ဆေးစသောက်ပြီးနောက် ၄၈ နာရီအတွင်း အတူနေရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
• ဆေးသောက်ချိန်ထက် ၃ နာရီ နောက်ကျသွားရင် ၄၈ နာရီအတွင်း အတူမနေပါနဲ့။ နေဖြစ်ရင် အရေးပေါ်တားဆေး သောက်ပါ။
• တရက်နောက်ကျသွားရင် နောက်ရက်မှာ ဆေး ၂ လုံးတခါတည်း သောက်ပါ။ ၄၈ နာရီ အတူမနေပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
• ဆေးတကပ်ကုန်တာနဲ့ ရာသီ လာလာ-မလာလာ၊ နောက်ဆေးတကပ် ဆက်သောက်ပါ။ အတူမနေဖြစ်သေးလဲ ဆက်သောက်ပါ။
• ၁-၇ ရက်အထိ ဆေးသောက်တာ နောက်ကျသွားရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
• ဆေးသောက်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း အန်ရင် နောက် ၁ လုံးသောက်ပါ။
• ဟော်မုန်း ၂ မျိးတွဲဆေးကနေ ဒီအမျိုးအစားကို ပြောင်းချင်ရင် (ဟော်မုန်းပါ) အရင်သောက်ရတဲ့ဆေးပြား သောက်နေတုံးမှာ ချက်ချင်း ပြောင်းသောက်ပါ။
• St. John's Wort တိုင်းရင်းဆေး၊ Rifampin တီဘီဆေး၊ Griseofulvin ပွေး-မှိုဆေး၊ Phenobarbitone, Phenytoin, Primidone, Carbamazepine, Dichloralphenazone အတက်သက်သာဆေး၊ HIV ဆေးတချို့၊ ပဋ္ဋိဇီဝဆေးတချို့တွေနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါ။
• ကလေးလိုချင်လို့ ဆေးရပ်ချင်ရင် ဆေးကပ်မကုန်သေးလဲ ရပ်လိုက်နိုင်တယ်။ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုယ်ဝန် ရနိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ်ထားရမယ်။
• ရက်လဲမှတ်လို့ လွယ်အောင် ရာသီမှန်စေပြီးမှ ကလေးယူသင့်တယ်။ ဆေးရပ်အပြီး ကြားထဲမှာ (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
1. Polymenorrhoea ရာသီ ခဏခဏဆင်းတာအတွက် တနေ့5mg ကို ၁၄ ရက်မြောက် နဲ့ ၂၅ ရက်မြောက် နေ့တွေမှာ သောက်ပါ။
2. Menorrhagia ရာသီဆင်း များတာအတွက် တနေ့ 10 mg နဲ့ ၁ဝ ရက်၊ ၃ လ ဆက်တိုက်။ ဒါမှမဟုတ် တနေ့5mg နဲ့ ၁၄ ရက်မြောက် နဲ့ ၂၅ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ သောက်ပါ။
3. Endometriosis သားအိမ်ရောဂါအတွက် တနေ့ 5-10 mg နဲ့ ၆ လသောက်ပါ။
4. Dysmenorrhoea ရာသီလာတုံးနာတာအတွက် တနေ့5mg နဲ့ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့က စသောက်ပါ။
5. Postponement of menstruation ရာသီမလာဘဲနေအောင် တနေ့5mg နဲ့ ရာသီမလာခင် ၂ ပတ် ကြိုတင် သောက်။ ဒိနောက်မှာ တနေ့ 10-15 mg သောက်ပါ။
• ရင်သား-ကင်ဆာရှိနေသူ၊ ရှိဘူးသူ။